चोरबाटो हुँदै प्याजको आयात बढेपछि मूल्य घट्यो ! « News24 : Premium News Channel
चोरबाटो हुँदै प्याजको आयात बढेपछि मूल्य घट्यो !
वीरगञ्ज, १० माघ । भारतबाट चोरबाटो हुदै प्याजको आयात बढ्न थालेपछि वीरगंजमा अहिले प्याजको मूल्य घट्न थालेको छ ।
प्रतिकिलो ३ सय ५० रुपैंयासम्म पुगेको प्याजको खुद्रा मूल्य अहिले प्रतिकिलो १ सय १० रुपैंयामा बिक्री भइरहेको छ ।
गत भदौ महिनादेखि महँगिदै प्रतिकिलो ३ सय ५० रुपैंयासम्म पुगेको प्याज अहिले प्रतिकिलो १ सय १० रुपैंयामा बिरगञ्जका उपोभोक्ताले खरिद गरिरहेका छन् ।
भारतबाट चोरीको बाटो हुदै नेपाल भित्रिन थालेपछि प्याजको मूल्य एकाएक सस्तिएको वीरगञ्ज तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी सघं पर्साले जनाएको छ ।
भारतको महाराष्ट्रस्थित नासिक र मध्यप्रदेशको इन्दौरबाट नेपाल प्याज आउने गरेको छ । वीरगञ्ज नाकाबाट अहिले दैनिक २० मेट्रिकटन प्याज भित्रिरहेको छ ।
यसरी भित्रिएको प्याज वीरगञ्जबाट काठमाडौं, नारायणगढ लगायत पोखरासम्म पुग्ने गरेको छ । वीरगञ्ज लगायत जनकपुर, विराटनगर, काकडभिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका नाकाहरूबाट समेत चोरीको बाटो हुदै प्याज भित्रिने गरेको संघले जनाएको छ । जसकारण पर्सामा मात्र हैन मुलुक भरि नै प्याज सस्तिएको अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।
यसरी मुलुकका विभिन्न नाकाहरूबाट चोरबाटो हुँदै प्याज नेपाल भित्रिने र भन्सार गर्ने गरेको समेत गुप्ताले बताएका छन् । भारतले असारमा आएको बाढीबाट प्याजखेती प्रभावित भएपछि नेपाल लगायत सार्क राष्ट्रमा गर्दै आएको निर्यातलाई बन्द गरेको थियो ।
त्यसैबेला देखि बन्द रहेको प्याजको आयात अहिले सहज हुँदा समेत भारतले निर्यात भने खोलेको छैन । भारतबाट वीरगञ्जसम्म चोरबाटो हुदै प्याज भित्रिएको कारण अन्यत्र भन्दा वीरगञ्जमा भने प्याजको मूल्य केही सस्तो रहेको गुप्ताले बताए ।
रुकुमपूर्वका सबै पालिकामा १५ श्ययाका अस्पताल बन्दै
टर्कीकाे संसदमा हंगामा- राष्ट्रपतिकाे आलोचना गरेकाे भन्दै कुटाकुट
सरकारी कार्यालयका ‘वेब पोर्टल’ नै असुरक्षित, कार्यालय प्रमुखको नामसमेत सच्चाइएको छैन
भक्तपुर महोत्सव स्थगित
कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र कोरोनाविरुद्ध एकजुट हुने प्रस्ताव संसदमा पेश हुँदै
चन्द्रपुर नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा वार्षिक परीक्षा चैत ७ देखि
access_time 11:04 am
access_time 10:49 am
access_time 10:05 am
बाल बिक्रम कार्की राैतहट, २३ फागुन । राैतहटकाे चन्द्रपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहकाे वार्षिक परीक्षा चैत
रुकुमपूर्व, २३ फागुन । रुकुमपूर्वका सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य सस्थालाई १५ श्ययाको अस्पतालमा
एजेन्सी, २३ फागुन । टर्कीको संसदमा कुटाकुट भएकाे छ । सिरियामा सैन्य हस्तक्षेप गरेको भन्दै